Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. ८० वर्ष पुगेर पनि आफ्नै हातपाखुरा बजाएर जीविका चलाउँदै – Emountain TV
८० वर्ष पुगेर पनि आफ्नै हातपाखुरा बजाएर जीविका चलाउँदै
शिखा श्रेष्ठ, धादिङ
धादिङ, २९ पुष । उमेर ढल्कँदै गएपछि हरेक मानिसले परिवार या आफन्तको सहारा खोज्छ । तर, धादिङको रुवीभ्यालीकी सानीमाया तामाङ ८० वर्ष पुगेर पनि आफ्नै हातपाखुरा बजाएर जीविका चलाउँदै आइरहेकी छन् ।
सानीमायाका श्रीमान्, दुई छोरा र दुई छोरी रहेको अहिले एउटी छोरीमात्र जीवित छिन् । छोरीलाई विवाह गरेर पठाएपछि उनी परिवारविहीन बनिन् । तर पनि जीवन बिताउन कसैको सहरा खोज्नुपरेको छैन । एक्लै भए पनि सानीमायाले खुसीसाथ जीवन बिताइरहेकी छन् ।
सानीमाया बिहान सबेरै उठ्छिन । खान बनाएर खान्छिन् अनि खोला किनारमा गिट्टी कुटन् जान्छिन् । पुसको कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोमा पनि उनी बिहान ८ बजे नै थोपल खोला पुगिसक्छिन् । दिनभरमा पाँच बोरा गिट्टी कुट्छिन् र तीन सय ५० रुपैयाँ कमाउँछिन् । सरकारले दिने एक हजार पनि उनको आम्दानीमा थपिन्छ ।
सानीमाया १३ वर्षदेखि एक्लो जीवन बिताइरहेकी थिइन् । २०७२ सालको भूकम्पले गाउँबस्ती नै ध्वस्त पारिदिएपछि गाउँलेसँगै सदरमुकाम धादिङबेँसीनजिकै विस्थापित भएपछि उनी गिट्टीको सहारा लिन बाध्य भइन् ।
भूकम्प प्रभावितले पाउने सरकारी अनुदान रकमको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ लिएर पनि उनले घर बनाउन चाहिनन् । गाउँमा गएर खेतीपाती गर्न नसक्ने भएपछि गाउँ नफर्किने बरु गिट्टी कुटेरै जीविका चलाउने अठोट उनमा छ ।
८० वर्षसम्म छिप्पिएको हातमा ठेला उठाउँदै घनले ढुंगा फोर्नमै उनलाई आनन्द मिल्छ । उनको हाँसोले पनि यही भन्छ– हात नफैलाऊ, स्वावलम्वी बन ।